आजबाट वृहष्पती धनु राशिमा प्रवेश, कुन राशिमा कस्तो प्रभाव ? – " सुलभ खबर "
कार्तिक २० गते बुधबार बिहान ६ बजेर ५७ मिनेटबाट वृहष्पती ग्रह धनु राशिमा प्रवेश गरेको छ । यो अब यो ग्रह चैत्र १७ गतेसम्म यही राशिमा रहने छ । बैशाख ०९ गतेसम्म वृश्चिक राशिमा रहेको वृहष्पतीले राशि परिवर्तन गर्दा यसको प्रभावले सबै राशिमा पर्न जान्छ ।
अबको ५ महिनासम्म अर्थात कार्तिक २० गतेबाट चैत्र १७ गतेसम्म वृहष्पतीको स्थिरताले कुन राशिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? हेरौँ राशि अनुसारको जानकारी :